မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဖတ်နိုင်ဖို့....
အရင်တုန်းကဆို ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမှာ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရှုခွင့်ရဖို့ဆိုတာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အရေးတစ်ခုလိုပါပဲ. သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေလောက်ပဲ အားပြုဖတ်နေခဲ့ရတာပါ.
မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရသ၊ သုတ၊ သတင်း၊ အနုပညာစတဲ့ စာပေပန်းခင်းကြီးထဲမှာ ပန်းမျိုးစုံ ဝေဆာပွင့်လန်းလာပါတော့တယ်.
အခုကျတော့လည်း များလွန်းလို့ ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာက ၀င်လာပြန်ရော…
တော်တော်များများကတော့ Google Reader, Yahoo Reader စတာတွေနဲ့ subscribe လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုတတ်ကြပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း အဲလိုဖတ်နေဆဲပါပဲ.
ဒါပေမယ့် ပိုကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေဘလော့ဂါ တစ်ချို့ မနှစ်က စဉ်းစားခဲ့ကြဖူးတယ်. အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းထားပြီး အသစ်တက်လာတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို အဲဒီ့ website လေးမှာ ဖော်ပြပေးထားနိုင်လို့ရှိရင် စာလာဖတ်သူတွေအတွက် အရမ်းအကျိုးကျေးဇူးများစေနိုင်မယ်၊ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေနိုင်မယ်လို့ ဆွေးနွေးကြံဆခဲ့ကြဖူးတယ်.
ဒါနဲ့ပဲ မြန်မာဘလော့ဂါ ပေါ်တယ်လ်လေးတစ်ခု လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်. Website Layout ပုံစံလေးတွေကို ကိုညီလင်းဆက်က တင်ပြလာခဲ့ပြီး ကိုစစ်အိမ်ကတော့ myanmarbloggers.org ဆိုတဲ့ ဒိုမိန်းလေးတစ်ခုကိုတောင် အိတ်စိုက်ဝယ်ထားပြီးနေပါပြီ. Fund ကလည်း အရန်သင့်ပါပဲ. စကြဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်.
မြန်မာဘလော့ဂ်စာအုပ်ထုတ်မယ်. ပြီးရင် မြန်မာဘလော့ဂါရပ်ဝန်း (Myanmar Bloggers Society, MBS) ကိုဖွဲ့မယ်. မြန်မာဘလော့ဂ် ပေါ်တယ်လ်လေး လုပ်မယ်ဆိုပြီး အသေးစိတ် စီစဉ်ခေါင်းချင်းရိုက် ဆွေးနွေးနေကြတုန်းမှာပဲ
အဲဒါနဲ့ပဲ အဲဒါတွေ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ အခုချိန်ထိ တိုးလို့တန်းလန်းတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်.
ဒီနေ့ညနေခင်း အိမ်ပြန်လာတော့ ဆီဘောက်စ်ထဲမှာ လင့်ခ်အသစ်လေးတစ်ခု ကြော်ငြာဝင်ထားတာ တွေ့မိတယ်. အဲဒါနဲ့ သွားကြည့်လိုက်တော့…
Wow!... This is what we want…. လို့ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်…
အဲဒီ့ဘလော့ဂ်လေးကို လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂါ ကိုကျော်လင်းထွန်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ပါတယ်.
သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါ. မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်နာမည်လေးတွေ မပါသေးဘူးဆိုရင်လည်း စာရင်းပေးခဲ့လိုက်ပါ.
လင့်ခ်ကတော့ ဒီမှာပါ ခင်ဗျာ.
u yan gyi yae i mar problam sheet nay tal bya .u har(blog)pal ya tal.
Hi, You can also visit following link